Ọ bụrụ na laptọọpụ ochie gị anaghị akwado Windows 10, Microsoft na-enye gị otu | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na laptọọpụ ochie gị anaghị akwado Windows 10, Microsoft na-enye gị otu
Joaquin Garcia | | Laptọọpụ, software
Ọ fọdụrụ ụbọchị ole na ole ruo mgbe onyinye maka Windows 10 n'efu na-agwụ, onyinye na-adọrọ mmasị nke mere ka ọtụtụ ndị ọrụ gbanwee ngwa ngwa na Windows 10 ma hapụ Windows 7 ma ọ bụ Windows 8 ochie, mana ọ bụghị ha niile nwere.
Enwere ugbua otutu ndị ọrụ nwere sistemụ arụmọrụ tupu Windows 10 na Microsoft choro idozi ya. Ya mere na United States, ọ malitela ọrụ dị egwu nke dọtara mmasị ọtụtụ mmadụ. Ọ bụrụ na laptọọpụ ochie gị enweghị ike ịkwado Windows 10, Microsoft na-enye gị laptọọpụ ọhụrụ.
Ọ na-ada ụda nke ukwuu ma ọ dị ka ahịa, mana eziokwu bụ na o nwere obere ebipụta ya, obere mbipụta nke na-ebelata ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ nwere ike irite uru. Nke mbụ, kọmputa ahụ ga-enwerịrị ike ibugharị ma nweta ikikere Microsoft ziri ezi. Ozugbo emezuru nke a. Ha nwere ike naanị A na-akwado kọmputa ndị nwere Windows 8 ma ọ bụ Windows 8.1, Windows 7 ma ọ bụ Windows Vista kọmputa agaghị akwado.
Microsoft ga - azụtara gị Dell Inspiron 15 maka laptọọpụ ochie gị
Ọ bụrụ na anyị ezutela isi abụọ ahụ, anyị ga-enwerịrị laptọọpụ ngwaike dakọtara na Windows 10 chọrọ, ihe kachasị dị mkpa nke Windows 10. Ọ bụrụ na mgbe nke a gasịrị, Windows 10 anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na nsogbu, onye ọrụ nwere ike irite uru na onyinye a. Mana ekwesịrị ime ya na Microsoftlọ Ahịa Microsoft, ya bụ, n'ụlọ ahịa Microsoft nkịtị na United States. Ee, ọ dị ka onyinye a ga-adị naanị na United States. Na Microsoftlọ Ahịa Microsoft ga-enye anyị Dell Inspiron 15, ihe emelitere nke ga - abia na Windows 10 nke a ga - enye anyi n’onodu maka laptọọpụ anyị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ezigbo mbipụta nke nkwalite a na-achọsi ike, ọbụlagodi na ọ ka na-atọ ụtọ ịgbanwe laptọọpụ mgbe Windows 10 anaghị arụ ọrụ, ọbụlagodi na ọ kwekọrọ na ya. Enwere ike Microsoft ga-ewepụta ya na ụbọchị nke Windows VistaN'ezie enwere ọtụtụ ndị ọrụ ga-anọgide na-eji Windows, ị naghị eche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ọ bụrụ na laptọọpụ ochie gị anaghị akwado Windows 10, Microsoft na-enye gị otu
cristina pea dijo
Na Spain, olee ebe m nwere ike ịkpọtụrụ? ... Echere m na ọ dị ezigbo mma na m ga-enwe mmasị ịnwe ajụjụ ọnụ maka oge ọkọchị ma gbalịa ịtụle ihe niile ha na-eweta ... .. ekele n'ọdịnihu ... .
Zaghachi cristina peña
Echere m na "ụfọdụ ọnọdụ dị"
Zaghachi Carlos J Villarroel M
Ihe omume 10 ọtụtụ n'ime anyị na-eme na ịntanetị nwere ike ịbụ iwu na iwu
A na-ahụ LG X Mach na LG X Max na vidiyo vidiyo nkwado